Izindaba - Indlela yokwenza ngezifiso i-logo yakho yangasese, inqubo yokwenza ngokwezifiso isindisa isikhathi sakho nomzamo wakho.
1, Thumela ifayela le-logo
Ukuze wenze ngokwezifiso i-logo, sicela uthumele amafayela womthombo we-logo ngefomethi ye-AI noma ye-PDF. Ifayela le-logo elicacile lingasisiza ukuthi wethule kangcono umphumela wokuphrinta we-logo lapho uphrinta. Ifomethi yesithombe izofiphala ngemuva kokukhuliswa, ngakho-ke asincomi ukuthumela ifayili le-logo ngefomethi yesithombe. Uma kungekho fayela eliwumthombo, umklami wethu angasiza namakhasimende ukwenza ilogo yefomethi yesithombe ku-AI noma kumafayili womthombo we-PDF ngesoftware ye-Adobe Illustrator, kepha lokhu kuzothatha isikhathi esengeziwe.
2, Xoxa ngendawo nendlela yokuphrinta yelogo
Ithimba lethu lokuthengisa lizoxhumana ngokushesha namakhasimende lapho i-logo kufanele ibekwe khona, ichaze ikhasimende ngemininingwane futhi futhi kudingeka iqinisekise nekhasimende indlela yombala, usayizi nendlela yokuphrinta yelogo. Ngemikhiqizo yesitoko esimi ngomumo, njengamanje sisekela ukuphrinta kwe-3D UV, nemikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso, sisekela ukuphrinta kwesikrini sikasilika, ukuphrinta kwe-3D UV, ukunyathela okushisayo, njll.
3, Qinisekisa ukuhumusha
Umdwebo womphumela uzokwenziwa ukuqinisekisa nekhasimende mayelana nemfuneko ethile, uma kukhona ushintsho, ikhasimende futhi lingalungisa i-logo ngokuya ngomphumela oboniswe futhi.
4, Ukuqinisekiswa kwamasampula womzimba ngaphambi kokukhiqizwa
Ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi, sizohlela ukwenza isampula ngokomzimba ngokuya ngezidingo zamakhasimende zingakapheli izinsuku eziyi-3-4 zokusebenza, bese sithatha izithombe zesampuli engokwenyama siye kukhasimende ukuqinisekisa umphumela wangempela futhi.
5, Qala ukukhiqizwa ngobuningi ekugcineni
Ngemuva kokuthi yonke into isiqinisekisiwe, sizohlela ukuqala ukukhiqizwa ngobuningi ngokusho komphumela wamasampuli aqinisekisiwe. Umjikelezo othile wokukhiqizwa kwesisindo unqunywa ngokwenani lenqwaba. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, umjikelezo wokukhiqizwa kwemivimbo yamasheya aselungile ungaphakathi kwezinsuku zokusebenza eziyi-7-10, futhi umjikelezo wokukhiqizwa kwemivimbo eyenziwe ngezifiso ungaphakathi kwezinsuku zokusebenza eziyi-15-25. Uma i-oda lekhasimende liphuthuma, ngokuya ngesimo, amalungiselelo okubekwa phambili angabhekwa futhi.
Izandiso ze-Eyelash, i-eye liner, Abadayisi bezinkophe, ezambiwa, Ukuqhuma Kwamehlo, imivimbo ye-mink,